Mahajanga: Nahatsiaro ireo Zandary lavo am-perinasa
dimanche, 11 février 2018 16:48
Nahatsiaro manokana ireo Zandary lavo am-perinasa ny farim-piadidian'ny Zandarmaria Mahajanga androany 11 febroary 2018 izay daty namonoan'olon-tsy fantatra ny Kolonely Richard Ratsimandrava teny Ambohijatovo-Antananarivo.
Zandary 16 mirahalahy no maty teo am-panatanterahana ny asany tamin'ny taon-dasa, ka ny 2 tamin'ireo Zandary niasa teto Mahajanga, ny iray niasa tany Maevatanana ary ny iray tany Ambato Boeny. Vao ny 22 janoary 2018 teo ihany koa no nisy Zandary novonoin'ny dahalo taty Mahajanga.
Nisy araka izany ny fanompoam-pivavahana niraisam-pinoana nahatsiarovana azy ireo sy nitondrana am-bavaka ny ankohonany tao amin'ny Chapelle militaire Toby Kolonely Jean Phillipe-Mahajanga. Taorian'io nisy ny lanonana ara-miaramila tsotsotra fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny tsangambato fahatsiarovana teny amin'ny bord de la mer.
Misy ny tolo-tanana manokana omena ireo vady aman-janaky ny Zandary maty am-perinasa avy amin'ny vondron-tobim-paritra tsirairay raha ny fanazavana, ary raisina an-tanana eny Arivonimamo amin'ny fitaizana zaza kamboty ihany koa ny zanak'izy ireo. Mahatratra 46 ny ankizy tezaina eny amin'izao.